Gobolka-Booqasho - Wikipedia
Booqashada dawladu waa booqasho rasmi ah oo uu madax u yahay waddan shisheeye, martiqaadka madaxwaynaha dalka, iyada oo kan dambe uu sidoo kale u matalayo marti-geliyaha rasmiga ah ee muddada booqasho ee gobolka. Marka laga hadlayo martida, waxaa badanaa la yiraahdaa soo dhaweynta gobolka. Booqashooyinka dawlad-goboleedyada waxaa loo tixgelinayaa in ay yihiin muujinta ugu sareysa ee xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal ee u dhaxeeya labada dal, guud ahaanna waxaa lagu tilmaamaa inay xooga saarayaan xafladaha rasmiga ah ee dadweynaha. Booqashooyinka aan rasmiga aheyn ee aan ka ahayn booqasho dawladeed oo waddanka kale ah oo xooga saaraya munaasabadaha xafladaha, oo ah madaxa dawladda ama madaxa dawladda, ayaa lagu kala saari karaa (sida hoos udhaca miisaanka) sida booqasho rasmi ah, booqasho shaqo, booqasho khaas ah, ama booqasho marti ah Dawlada
Booqashooyin dawladeed waxay caadi ahaan ku lug leeyihiin qaar ka mid ah ama dhammaan qaybaha soo socda (dal kasta oo marti geliya wuxuu leeyahay caadooyinkiisa gaarka ah): Madaxa booqashada ee gobolka ayaa isla markiiba la salaamay markii ay soo gaareen martigeliyaha (ama wakiil rasmi ah, haddii labada hoggaamiye ee dawladu ay la kulmaan meel kale meel kale) iyo safiirkiisa (ama madax kale oo madax ka ah) oo la aqoonsado dalka martida loo yahay. Safaarad 21-gunaan ah ayaa loo raraa si sharaf leh madax madaxeedka gobolka. Diyaarinta laba geesood oo qaran oo ay sameeyeen koox ciidan. Heesta dalka martigelinta waxaa badanaa la ciyaaraa marka hore. Dib-u-eegis ku saabsan ilaaliye ciidan ee sharaf. Madaxa booqashada gobolka waxaa si rasmi ah loogu soo bandhigay mas'uuliyiin sarsare / wakiillo ka socda waddanka martida loo yahay iyo madaxweynaha martigelinta gobolka waxaa loo soo bandhigay wafdiga la socda madaxweynaha booqashada ee gobolka. Isbeddel hadiyado ah oo u dhaxeeya labada hoggaamiye ee gobolka. Casho-goboleedka, caagad cad ama khaanad madow, ayaa waxaa ku yaal madaxweynaha martigelinta ee gobolka, iyada oo madaxweynaha booqashada uu yahay marti sharaf. Booqashada baarlamaanka dalka martida loo yahay, oo badanaa lala yeeshay madaxweynaha booqashada gobolka oo lagu martiqaaday in uu cinwaan rasmi ah u gudbiyo xubnaha golaha sharci dejinta. Booqashooyin heer sare ah oo ay hoggaamiyeyaashu booqdaan dawladaha martida loo yahay ee martigelinaya sida caleemo saarista qabriga milatariga ama xabaalaha. Munaasabadda xafladaha dhaqanka oo u dabbaal dagaya xiriirka labada wadan.
Agaasin madaxweyne ah oo madaxweyne Gerald Ford ka soo jeeda boqoradda Margrethe II ee Denmark iyo Henrik, Prince Consort of Denmark, 1976 Madaxa booqashada dawlad-goboleedka waxaa inta badan ku wehliya wasiir ka tirsan xukuumadda, badanaaba wasaarada arrimaha dibadda. Wakiilkii diblomaasiyadeed, wafuud ka kala yimid ururada ganacsiga ayaa sidoo kale la socda madaxweynaha booqashada ee dalka, wuxuu ku yaboohay fursad ah inuu isku xiro oo horumariyo xiriiro dhaqaale, dhaqan, iyo xiriir bulsho oo lala yeesho hoggaamiyeyaasha warshadaha ee dalka lagu soo booqdo. Dhamaadka booqashada gobolka, madaxa shisheeye ee waddanka ayaa si caadi ah u soo jeediya martiqaad rasmi ah oo loo diro madaxa qaran ee qaranka oo booqanaya kuwa kale mustaqbalka, bixin doona booqasho dawladeed oo isdhaafsan.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Gobolka-Booqasho&oldid=197791"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 16 Diseembar 2019, marka ee eheed 20:17.